Iyo Ibex 35 pamberi pechinetso chemapoinzi mazana mazana masere | Ehupfumi Zvemari
Mwedzi waNdira wave wakanaka kwazvo kune yakasarudzika indekisi yemari yenyika, iyo Ibex 35, iyo yatangazve chiteshi chekupfuurisa kanenge munguva pfupi. Simba rayo rakakura kubva pamatanho e8500 mazana uye zvese zvinotaridzika senge nzombe rally yezororo reKisimusi yasvika nekumwe kunonoka, asi zvirokwazvo kwete pasina kusimba. Iko iko kwese kukosha kweSpanish stock market kuri kukoshesa zvakanyanya, mune dzimwe nguva pamusoro pe20%.
Hapana munhu akafunga kuti equities yakatanga gore rino neizvi kusimba mukukwira. Hazvishamise kuti vazhinji vashoma uye varipakati varimari vaive kure nemisika yemari nechinangwa chekutenga nemutengo wakaderera zvakanyanya kupfuura zvavakaita pakupera kwegore rapfuura. Uku kufamba, nekudaro, kwakashamisa munhu wese uye zvinogona kunge zvanonoka kupinda mumisika yezvemari panguva ino.
Mukutaura zvinhu zvese zvinoita sekudaro ndezve kubhoikana, asi yehukuru hwakasimba uye iyo inogona kuramba iine nzira refu yekumusoro. Nekudaro, kana ikapfuura nhanho dzainayo pa9800 mapoinzi, zvinogona kureva shanduko mune zvinoitika munguva pfupi nepakati. Kunze kwekugadziriswa kunonzwisisika kwaungave nako munzira. Ichave imwe yekiyi iyo iyo Ibex 35 ichatipa isu kuti titore imwe kana imwe nzira yekudyara, kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi uko kunogona kuve neiyi index index.
1 Ibex 35: kukosha kuri kuwedzera
2 Hukama pakati peUSA neChina
3 Forecast pamusika wemari wenyika
4 Ibex 35 kudzokorora kudzokorora
5 Njodzi yemusungo wekusimudzira
6 Deredza zvigaro pamusika wekutengesa
Ibex 35: kukosha kuri kuwedzera
Mhedzisiro yesangano iri pamari yenyika yakave nekukurumidza. Nekutenda mune akakosha chaizvo maitiro. Kusvika padanho rakanyorwa makambani mu magetsi Ivo vakaiswa mune yemahara kusimuka mamiriro. Ndokureva kuti, ivo havasisina kuramba mberi uye nekudaro kugona kwavo kwekudzokorora ikozvino kwakanyanya kwazvo. Sezvazviri mune chaiyo nyaya yeEndesa kana Enagás, ayo ari mamwe emabheti egore rino nechikamu chikuru chevanoongorora zvemari. Zvisinei nekuti ivo vaive vatounganidza mibairo yakawanda kubva gore rapfuura.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti iyo Ibex 35 yakabva mumamiriro ekushomeka kwakanyanya uye kuti yaive muchinzvimbo chekuzvimisa iri pasi pemapoinzi mazana masere nemazana mashanu. Shanduko yakanyanya muhunyanzvi hwenyika yedu uye iyo yakabata chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati vane tsoka yakachinja. Ikozvino zvinosara kuti zvionekwe kuti ingani inosarudzwa indekisi yemari yenyika inogona kusvika. Chero zvazvingaitika, zvese zvinoita kunge zvinoratidza izvo zvakadaro kuchave nekukwira kumusoro panguva yekutanga semester yegore. Ikoko kwaingave kuri pamatanho ari pakati pematanho e9500 ne9800 mapoinzi.
Chimwe chezvikonzero chekutsanangura ichi chisingatarisirwe kumusoro kufamba ndeye iyo kuvandudzwa kwehukama hwekutengeserana pakati pemasimba maviri ezvehupfumi. Kusvika padanho rekuti chibvumirano chinoburitsa kwazvo chinogona kusvikwa mumwedzi iri kuuya. Chinhu icho pasina mubvunzo chakapa kuwedzera kwakasimba kumisika yemasheya kutenderera pasirese. Kune rimwe divi, isu hatigone kukanganwa kuti kune zvimwe zvinhu zvakatungamira mari yekutenga zvinzvimbo.
Mupfungwa iyi, zvakakosha kujekesa chokwadi chekuti mumavhiki apfuura pakave nerunyararo rwusina kusimba pakati peUnited States neChina muhondo yekutengeserana iri kuitwa neve colossi yehupfumi hwenyika. Sezvo zvave zvichishamisa kwazvo kuti hurumende yeWashington yambomisa iyo mutero unokwira kwemamiriyoni mazana maviri emamiriyoni emadhora. Kunyange zvakadaro, Beijing inobvuma kutenga "yakawanda" zvigadzirwa zveNorth America. Icho chiri, chero zvakadaro, imwezve hondo yepfungwa iri kurwiwa nenyika mbiri idzi huru pasi pano.
Forecast pamusika wemari wenyika
Mune imwe tsinga, kubva kuBankinter yekuongorora uye yekuongorora dhipatimendi vanoshandisa mikana yakawanda kuburikidza iyo inosarudzika indekisi yeSpanish stock market inogona kupfuura mukati megore rino. Nezvekufungidzira izvi, "mune yedu yekutanga mamiriro, isu takagadziridza tarisiro yedu mutengo kusvika pasi gumi nemazana manomwe nemakumi manomwe nematanhatu (kubva pa10.712 11.781 mapoinzi anofungidzirwa muna Chikumi). Iyi gadziriso inotorwa kubva kune anotevera mamiriro anonongedzera kubva kuboka iri rezvemari.
Un kukwira kudiki muIRR yemakore gumi ebhandi panguva yetrimester. Kunyanya, goho rechisungo rakakwira kusvika pa1,49% kubva pa1,44% kare.
El EPS inofungidzira kucheka kubvumirana kwe2019 (-0,6% kusvika 827,4 euros) zvichienzaniswa nezvakafungidzirwa munaJune.
Una yepamusoro panjodzi (6,2%, zvichienzaniswa ne5,35% kare) izvo zvinosanganisira kurasikirwa kwesimba kwatinofungidzira hupfumi hweSpain munzvimbo dzinouya.
Kugadziriswa kwekudzikira kwemuenzaniso wekukoshesa pasi-up.
Ibex 35 kudzokorora kudzokorora
Pasi pezviitiko izvi, kuongororwa kwesangano iri rezvemari kunoratidza kuti isu tinofanirwa kutarisa pakatemwa -10% kuti titarisire ramangwana. kudzika kudzokorodza mabhenefiti anoshandiswa mumhando dzekukoshesa dzemakambani eIbex. “Inofanirwa kutarisirwa mupfungwa kuti mhando kumusoro pasi (Chinangwa PER, pakati pevamwe) chinosanganisira shanduko mukukura kwetarisiro pakutanga apo ma micro vaongorori (kuongorora pasi kumusoro) vanowanzoita zvisina kukurumidza ”tsanangura vanoongorora nezvekodzero muboka iri rezvemari.
Izvi zvakatonyanya kana kushomeka zviri kutaurwa nevamwe vaongorori vane ruzivo mumisika yemari, vachiratidza kuti kudzokororwa kwakaderera mumaonero emusika wemasheya wenyika kungave kwakajairika. Chinhu chakazopedzisira hachina kushata zvachose kana munhu akafunga nezvedanho raitorwa nemisika yemasheya yepasi rose mukupera kwegore rapfuura. Iko iyo Ibex 35 yakasvika padyo padanho re 8.500 points. Sezvo iyo 9.200 irimo mune idzi chaiyo nguva.
Njodzi yemusungo wekusimudzira
Chero zvazvingaitika, zvakakosha kuti uzive kuti kuwedzera uku kuri kuitika mumisika yemari pasi rose kunogona kuzova musungo. Hazvishamise kuti zvinokonzeresa chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati kuti vapinde mumisika yemari pamberi pekunzwa kwake kwese. Nenjodzi iri pachena yekuti vanogona kubatwa munzvimbo dzavo. Ndokureva nemitengo yekotesheni iri kure kwazvo kubva kumutengo wekutenga. Ichi chinhu chakamboitika munhoroondo uye icho chinogona kukugadzira inopfuura rimwe dambudziko kwauri kubva zvino zvichienda mberi.
Ehezve, iwe haugone kukanganwa kuti iko kuri kuitika maitiro mumisika yemari kuchiri kwakasimba uye ichi chinhu chisingagoni kukahadzika panguva ino. Zvirinani kusvikira nhanho dzekutsigira dzeimwe kukosha dzakapfuudzwa uye kuti munzvimbo yekutanga iri mu padyo neiyo 9.800 mapoinzi. Mupfungwa iyi, pachine nzira refu yekufamba uye hazviite kuti zvinangwa izvi zvikwanisike munguva pfupi nevashambadzi vadiki nepakati. Chero zvazvingaitika, iri njodzi yaunofanirwa kufungidzira kana chinangwa chako panguva ino kutora zvinzvimbo mumusika wemasheya zvakare.
Deredza zvigaro pamusika wekutengesa
Pane zvinopesana, izvi zvinowedzera zvinogona kushandiswa kudzikisira nzvimbo dzako mumisika yemari. Saka kukwana kana kukwana zvinoenderana nehurongwa hwekudyara hwauchazoshandisa gore rino. Kutora mukana weiyo misangano mumitengo yezvikamu zvemakambani akanyorwa. Zvekuti nenzira iyi, mafambiro ako anogona kugadzikiswa mukutarisana nekusagadzikana mumisika yemari mumazuva anouya kana kunyangwe mwedzi. Icho chirongwa chakazvimiririra chekudzivirira icho chakanangana nekuchengetedza yako capital pane zvimwe zvehunyanzvi kufunga.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti zvirinani Nakidzwa nemari inowanikwa inogadzirwa usati wadonha ma euro akawanda munzira. Mugore rinoita kunge rakaomarara kune izvi zvemari zvinhu. Iko panguva chero ipi nguva iwe yaunogona kutanga yakadzika mafambiro mune epasi rese equity misika. Nesimba rinogona kushamisa chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Usakanganwe kana iwe uchida kupa chengetedzo huru kune ako mashandiro pamusika wemasheya.
Chekupedzisira, iwe haufanire kukanganwa kuti idzi mwedzi yekutanga yegore inowanzo kuve yakanakira zvido zvemisika yemari. Pachivanhu zvagara zviri zvakadai uye gore rino kwanga kusiri izvo. Izvo hazvigone kukanganwika kuti iyo Ibex 35 yakabva kune imwe mamiriro ekushomeka kwakanyanya uye kuti yaive muchinzvimbo chekuzvimisa pachayo pazasi pezviuru zvisere nemazana mashanu. Shanduko yakanyanya muhunyanzvi hwenyika yedu uye iyo yakabata chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati vane tsoka yakachinja. Ikozvino zvinosara kuti zvionekwe kuti ingani inosarudzwa indekisi yemari yenyika inogona kusvika. Usakanganwe kana iwe uchida kupa chengetedzo huru kune ako mashandiro pamusika wemasheya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iyo Ibex 35 pamberi pechinetso chemapoinzi mazana mazana masere